Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qaab-dhismeedka Birta - Shiinaha
Bakhaar Dhismeedka Dhismeedka Dhismaha Dhismaha Deg-degga ah
1.Building System Customized Warehouse haddii aad leedahay sawirro iyo farsamooyin qeexan, soo dhowow noo soo dir waqti kasta. Hadafkeenu maahan oo kaliya inaan siino dhisme qaab dhismeed bir ah oo tayo sare leh, laakiin sidoo kale inaan ilaalino xiriir shaqsiyadeed iyo mid xirfadeed oo lala yeesho macaamiil walba. Si kasta oo ay u weyn tahay ama u yartahay shuruudahaaga waxaan ku dadaalaynaa sida ugu wanaagsan ee aan u dabooli karno baahidaada. Hal adeeg oo joogsi ah oo ka imanaya nashqadeynta, soo saarista, gaarsiinta rakibidda iyo adeegga kadib. 1.We soo saari karno si adag sida aad d ...
Bakhaarka qaabdhismeedka birta warshadaha ee horay loo sii qurxiyay
Nidaamka Dhismaha reli Kalsoonida sare ee shaqada birta. Waqti dheer oo la isticmaalo ilaa 50 sano. Structure Qaab dhismeedka birtu waa mid saameyn leh, xasilloon oo wanaagsan oo ka hortagga dhul-gariirka miisaanka ayaa fudud. Structure Qaab dhismeedka birta ah ee loo isticmaalo darajada sare ee warshadaynta. Structures Dhismayaasha birta ah si dhaqso leh oo sax ah ayaa loo soo ururin karaa, waqti badbaadin iyo badbaadin xoog leh. Space Meel ballaadhan oo gudaha ah oo ah qaab-dhismeedka birta ama birta birta ah, inta ugu badan ee qaab-dhismeedka birta prefab ah ayaa gaari kara 80meters. ● Waxay u egtahay inay sabab u tahay qaab dhismeedka shaabadaynta. ● qurux badan ...
Qiimo jaban Dhismaha dhismaha Birta naqshad ballaaran oo laba dabaq ah dhisme bakhaar dhisme
Rakibaadda Qaab-dhismeedka birta nooca cusub ah ayaa aad ugu habboon in la rakibo, 2,000 mitir murabac ayaa lagu dhammayn karaa 1 toddobaad gudahood 5 shaqaale ah. 1) Muraayadaha birta ugu muhiimsan (qaabdhismeedka) dhammaantood waxay kuxiran yihiin qaanso xoog badan, looma baahna alxanka goobta. Ku rakibideedu wuxuu la mid yahay baloogyada dhismaha. (2) Guud ahaan 2 nooc oo purlins ah ayaa loo isticmaali doonaa saqafka iyo darbiyada Qaab-dhismeedka Birtayada. (waxaa jira ugu yaraan 4 nooc oo purlins ah ayaa loo isticmaali doonaa saqafka iyo darbiyada iyadoo la soo saarayo waxyaabo kale ...